Marwada Koowaad ee dalka oo booqatay dhaawacyadii Qaraxii Ex-Kaantarool “Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Marwada Koowaad ee dalka oo booqatay dhaawacyadii Qaraxii Ex-Kaantarool “Sawirro”
Marwada Koowaad ee dalka oo booqatay dhaawacyadii Qaraxii Ex-Kaantarool “Sawirro”
Marwada Koowaad ee dalka, Marwo Seynab Cabdi Macalin ayaa caawa booqatay qaar ka mid ah dhaawacyada ku waxyeeloobay Qaraxii wuxuushnimada ahaa ee Ex-Kaantarool.
Marwo Seynab ayaa warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee dhaawacyadan ka dhageysatay dhakhaatiirta iyo maamulka Cusbitalka Ordogaan, iyagoona faahfaahin ka siiyay hannaanka ay u maareeyeen dhaawacyadii halista ahaa ee loo qaaday dalka dibaddiisa.
Sidoo kale, Marwo Seynab Cabdi Macalin ayaa la kulantay qaar ka mid ah qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta ku dhaawacmay qaraxii lagu xasuuqay dadka Soomaaliyeed ee birmageydada ahaa, waxa ayna u sheegtay in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooduba ay garab taagan yihiin.
Marwada Qaranka ayaa tacsi u dirtay ehelada muwaadiniintii ku shihiiday Qaraxii bahalnimo ee Ex-Kaantarool, waxa ayna ku baaqday in si mugleh loo garab istaago ubadka iyo qoysaska ay ka tageen oo ay u ahaayeen isha nololeed ee ay ku tiirsanaayeen.
Ugu dambeyn, Marwada koowaad ee dalka ayaa u mahadcelisay dowladaha aan walaalaha nahay ee gurmadka caafimaad ee degdega ah lasoo gaaray muwaadiniinteenna ku dhaawacmay qaraxaas wuxuushnimada ahaa, waxa ayna tilmaamtay in garab istaaggoodu aanu ka go’ayn xusuusta dadka Soomaaliyeed.
Previous articleKumaandooska Soomaaliya oo howlgalo ballaaran ka wada Sh/Hoose
Next articleWasaaradda Kalluumeysiga oo ka hadashay Kalluun dibadda uga soo baxay xeebta Muqdisho